Laggasaa Wagii ajjeefamuun dura MM Abiy ABO'f odeeffannoo kennuu dhaabichi mirkaneesse - BBC News Afaan Oromoo
Ministirri Muummee Abiy Ahimad waggoota 11 dura haleellaa mootummaan hogganaa waraana ABO gama Lixa biyyattii kan ta'e Laggasaa Wagii irratti yaade dursanii hoggantoota dhaabichaaf gurra buusu dhaabichi hime.
Dhaabni ABO ibsa kaleessa galgala (Jimaata) baaseen dhimma Ministirri Muummee irra -deddeebbiin dubbatan yeroo mirkaneessu kuni kan duraati.
Laggasaa Wagiin Adoolessa bara 2008 kan ajjeefame yoo ta'u haala ajjeechaan itti raawwate dokimantariin hojjeetame yeroos miidiya biyyaalessaa irratti darbuun isaa ni yaadatama.
MM Abiyyi Ahimadiifi qabsoo Oromoo
Gidduu kana MM Abiy hoggantoota kaan waliin ta'un hookkara torban darbe lubbuu namoota 78 galaafate tasgabbeessuuf qaamolee hawaasaa waliin marii gaggeessaa turan.
Waltajjii kanneen irrattis dhimmoota mariin ala walitti dhufeenya isaan dhaaba buufata isaa Ertiraa godhatee ture, ABO, waliin qaban dubbataniiru.
Waltajjii magaalaa Harar taasifame (Roobii) irratti wanta dhimma kana akeeku kan dubbatan yoo ta'u marii magaalaa Amboo (Kamisa) irrattis dhimma Laggasaa kaasuutu dhagahame.
Keessumaa magaalaa Ambootti akka dubbatanitti taanaan irra - deddeebbiin lubbuu Laggasaa baraaruuf akka yaalan agarsiisa.
Dhaabni maal jedhe?
Yeroo MM Abiy dhaabbata Eejansii Nageenya Netwoorkii Odeeffannoo (INSA) hojjetaa turan gama Lixa biyyattii waraana ABO irratti mootummaan duula gaggeessuuf akka jedhu dubbachuu hima ibsi dhaabni kaleessa baase.
Waa’ee hookkara tibbanaa hanga ammaa maal beekna?
Akka ibsi bahe jedhutti yeroos Obbo Abiy nama tikaa mootummaa keessa hojjetuufi Jarman tureen Hayyu Duree ABO Obbo Daawud Ibsaa qunnamuun dubbisaniiru.
''Haasawa sana keessatti Jaal Laggasaa Wagii ajjeesuuf akka hordoffiin gaggeeffamaa jiru odeessaa fi yaada qabu Jaal Daawuditti himuun isaatis dhugaa dha,'' jedha ibsi bahe.
Kanaan alatti, bulchaan ammaa Itoophiyaa deeggarsa maallaqaa dhaabichaaf gochuu isaanii dhaabichi quba hin qabu jedheera.
Itti fufuun, hogganaan dhaabicha Obbo Daawud Ibsaa Laggasaa Wagiin lubbuu akka of oolchu itti himanis murtii ofii fudhachuu hima.
MM Abiy: 'Jawaar dhiisaati warra nu ajjeesuuf qophaa'eyyuu dhiisnee waliin jiraachaa jirra'
''...loltoota ajaja isaa jala jiran kan bakkoota adda addaatti bobbaasee jiru marfama diinaa keessatti, naannichas diinaaf dhiisee bakka sana kan gadi hin lakkisne tahuu isaa beeksisuudhaan murtii fudhate,'' jedha.
Ibsa kana keessatti gahee yeroos MM Abiy taasisan ibsamus yeroo ammaa mootummaan amma jiru dhaaba ABO waliin hojjechuu irratti hanqinni akka jiru eereera.
Kanas, mammaaksa "Yoo garaa irraa booyan imimmaan hin dhibu," jedhu mata duree ibsa dhaabichaa gdheera.
''... har'a yeroo isaan aangoo kana of harkaa qabanii fi Hoogganni ol'aanaan ABOtis qaamaanuu isaan cinaa jiru kanatti waan nuti waliin hojjechuu dandeenyutu irra guddaa dha,'' jechuun ibsa.
ABO'n maaliif amma ibsa baasuu barbaade?
Mariiwwan MM Abiy Ahimad gidduu kana dhimma nageenyaa irratti hawaasa waliin taasisan miidiyaaleen keessa akka hin seenne dhorkamne jedhan jiru.
Gama kaaniin dubbiin MM Abiyyi tibbanaa qeeqa bulchaan ammaa Itoophiyaa mooraa qabsoo siyaasaa Oromoof haaraadha jedhu irratti ka'ef akka deebiitti ilaalameera.
Dhaabni ABO yeroo dheeraa booda yeroo duraaf dhimma kana irratti sababa ibsa baaseef kan gaafanne miseensi Gumii Shanee dhaabichaa ABO Obbo Mikaa'el Booran ''Ibsa kana baasuun waan sadiif barbaachise,'' jedhu.
Sababni jalqabaa jedhan MM Abiy irra deddeebbiin ajjeechaa Laggasaafi qunnamtii ABO waliin qaban kaasuu isaaniiti. Dubbiin isaanii kuni 'akka qabsoo kanaaf qooda kennaa turan agarsiisus' kan biraa waan akeeku qaba jedhu.
''Wareegamuu isaatiif hanqinni gama keenyaan akka jirutti fakkeessuu waan fakkaatu, shakkii hin barbaachifne ummata keessatti uumuu waan danda'uufi irra deddebi'uun isaanii kuni maaliif barbaachise kan jedhu ummanni akka hin dogongorre dhugaan jiru maali kan jedhu lafa kaa'uufi,'' jedhan.
Kan lammataa ''Dr Abiy maaliif waa'ee jaal Laggasaa qofa kaasu,'' kan jedhan Obbo Mikaa'el dhaabi biyya bulchu waggoota dheeraaf miseensota dhaabichaa irratti haleellaa gaggeessuufi ammallee kuni akka hin dhaabbanne himu.
Akka sadaffaatti, kan kana dura waan Laggasaaf jedhanii godhan dubbatan har'a yeroo aangoon harka isaanii jiruufi hogganni dhaabaa [kan ABO] Finfinnee jiru ''har'a waan sana caalu hojjechuun ni danda'ama,'' jechuun himu.
Wanti MM Abiy tibbanaa dubbatan jedhame wanta hedduu akeekuu danda'a.
Akka fakkeenyaatti biyya sabbonummaan wal dhiibuufi hawaasa dhimma Itoophiyaa abjuu walfakkaataa hin qabne gidduu MM Abiy ijoo dubbii gochuu danda'a.
''Waggoota 28 EPRDF [ADWUI] aangoorra ture kana ABO'n kan wareegama guddaa itti baase invastii itti godhe miseensota OPDO fi OPDO mooraa qabsooti deebisuudha,'' jedhu Obbo Mikaa'el.
Kanaanis, ibsi dhaabni isaanii baase akkaataa adeemsa MM Abiyyis ta'e akkaataa ummanni kaan [Oromoon alatti] MM Abiy ilaalu irratti homaa dhiibbaa hin qabaatu jedhu.
''Ummanni kaan hojii lafarratti hojjetamun isaan ilaala,'' jedhu Obbo Mikaa'el.
Ibsi bahe ''Qabsoo taasifamaa jiru keessattis ta'e nuufi isaan gidduu wal amantii uumee waan gaarii fida jenna malee rakkoo fida jennee hin yaadnu,'' jechuun BBC'tti himaniiru.
MM Abiy Ahimad: Waraanni nu haa gahu kan jenneef, kan Ertiraa, Somaaliyaa ture Wallagga akka dhufuuf miti